नेपालमा ४ दिनमै दोब्बरले वृद्धि भयो कोरोना संक्रमण, तेस्रो लहरको दोस्रो चरण शुरु ! | आर्थिक अभियान
नेपालमा ४ दिनमै दोब्बरले वृद्धि भयो कोरोना संक्रमण, तेस्रो लहरको दोस्रो चरण शुरु !
पुस २२, काठमाडौं । नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप ५४० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीवार दिएको जानकारी अनुसार उक्त अवधिमा ७ हजार २०९ पीसीआर परीक्षणमा ४७८ जना र ४ हजार ८९० एन्टिजेन परीक्षणमा ६२ जना गरी कुल ५४० जनामा भाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।
त्यस्तै, सोही अवधिमा देशभर १ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिहीवार २४ घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ६०२ पुगेको छ ।हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ४३१ जना पुगेको छ ।
यसैगरी, बिहीवार २७१ जना निको भएसँगै हालसम्म ८ लाख १३ हजार ४४७ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् ।
४ दिनमै दोब्बरले वृद्धि भयो संक्रमण, तेस्रो लहरको दोस्रो चरण शुरु !
नेपालमा कोभिड-१९ को तेस्रो लहर ओमिक्रोन भेरिन्टको संक्रमण दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ ।
दैनिक संक्रमण संख्या २०० हाराहारीमा झरिसकेको नेपालमा अहिले फेरी दैनिक ५०० भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिन थालेको छ ।
पुस १८ गतेको तथ्याङ्कमा जम्मा २१६ जनामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि भने हरेक दिन संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ ।
पुस १९ गते ३२६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा, पुस २० गते ३९६ जनामा र पुस २१ गते ४३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहीवार भने ५४० जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै तेस्रो लहरको महामारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको आकलन गरिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर २५ लाख ७५ हजार संक्रमित थपिदा ७ हजार ५०० भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो ।
पछिल्लो समय कोरोनाबाट धेरै प्रभावित हुने देशमा फ्रान्स अघि देखिएको छ। फ्रान्समा दैनिक साढे ३ लाख व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। फ्रान्सपछि बेलायतमा दैनिक २ लाख हाराहारी नयाँ संक्रमित पहिचान भइरहेका छन् ।
छिमेकी देश भारतमा समेत दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख हाराहारी पुगीसकेको छ ।
नेपालमा अहिले मृत्युदर कम देखिएपनि माघ तेस्रो साता सम्म संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिन सक्ने र मृत्युदर पनि बढ्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।